Iindaba - Iindidi eziqhelekileyo zokutshintsha ezisetyenziselwa ukuveliswa kwe-elektroniki
I-LZ7 eValiweyo yoMda woTshintsho
Iindidi eziqhelekileyo zokutshintsha ezisebenzisa ukuvelisa ngombane
Ukuba unomdla wokufumana okungakumbi malunga nemicroswitches, ukwiphepha lasekunene. Kule nqaku, siza kujonga kwiindidi ezahlukeneyo zokutshintsha okuncinci. Oku kuya kukunceda ukhethe iyunithi elungileyo ukuhlangabezana neemfuno zakho zeprojekthi. Eli nqaku liza kukunika ukuqonda okunzulu kwiindidi ezi-6 zezi zixhobo. Makhe sijonge nganye nganye. Funda ukuze ufumane okungakumbi.
Uluhlu olungezantsi ziintlobo ezintandathu zezi yunithi. Nangona zonke ezi zinemisebenzi efanayo yokwenza, kukho umahluko phakathi koyilo. Oku ngumahluko owenza ukuba bohluke omnye komnye.
2. Ukutshintsha amaqhosha okutyhala
3. Rocker Ijija
4. Iitshintshi ezijikelezayo
5. Isilayidi Esitshintshayo
6. Ukutshintsha kokutshintsha
Ukutshintsha okuncinci kukutshintsha okuncinci okubonisa iqhosha okanye iqhosha lokutyhala. Ezi yunithi azidingi mzamo mkhulu ukuze zisebenze ngokufanelekileyo. Kuba ezi zincinci kakhulu, ziyilelwe ukusetyenziswa kwinqanaba elincinci kweeprojekthi.
2) Uhlobo lweqhosha lokutyhala
Ezi yunithi zinokufumaneka kwiindlela ezininzi kunye neemilo. Ngaphandle koku, iintlobo ezahlukeneyo zezinto zisetyenziselwa ukuzenza. Xa ucofa iqhosha, liyavula okanye livale isekethe. Unokukhetha kuhlobo lomzuzwana okanye lokuncamathela. Ukuhlala emva kwexesha kuvuliwe okanye kuvaliwe ukuba awuzukucinezela kwakhona.
3) Uhlobo lwerocker
Xa ucinezela olu hlobo lweswitshi, luya kugungqisa iqhosha lesixhobo ukuze uvale abafowunelwa. Ngokufanayo, ukuba unyikimisa iswitshi kwelinye icala, iya kuvula isekethe. Kwakhona, ezi zixhobo ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezitayile. Umzekelo, ungayifumana ngocwangciso ezimbini: ipali ephindwe kabini okanye ipali enye.
4) Uhlobo olujikelezayo
Njengoko igama libonisa, olu hlobo lweyunithi lubandakanya ukuhamba konxibelelwano. Unokuba nomfanekiso-ngqondweni wokucofa umpheki ukuze ufumane ukuqonda okungcono malunga nendlela olusebenza ngayo olu tshintsho.
Isilayidi sokutshintsha sibonisa iqhina elincinci. Ukuba ufuna ukuvula okanye ukuvala isekethe ngaphakathi kwesixhobo, kuya kufuneka usilayishe i-knob kuyo. Umzekelo, ezi zixhobo zihlala zisetyenziswa kuloliwe ukutshintsha imikhondo kuloliwe ongenayo.
Iqhosha Push Tshintsha Micro, Ukutshintsha kombane, Guqula utshintsho, Iqhosha lokutyhala leFootswitch, Micro Push Iqhosha Micro Tshintsha Akukho Nc Ndawonye, Guqula ukutshintsha iBoot,